Ukunciphisa uxinzelelo lwamanzi → isebenza njani? • Ukucoca njani? • Ukuseta?
Uxinzelelo loxinzelelo lwamanzi, imigaqo kunye nefilitha kunye noxinzelelo lwegesi. Utshintsho lwexinzelelo amanzi Ukuvela kwenkqubo yamanzi kuhlala kuphumela, phakathi kwabanye, ukusuka kwinkqubo eyamanzi engalunganga okanye yenzeka ebusuku, xa ukungena kwamanzi kancinci kubangela ukunyuka koxinzelelo kwimibhobho, enokuthi yonakalise inkqubo kunye nezixhobo ezixhume kuyo, kwaye ibeke umsebenzisi kwiindleko ezingeyomfuneko.
Ukufakwa kwesinciphiso soxinzelelo lwamanzi iya kunciphisa uxinzelelo lobonelelo oluphezulu kakhulu, gcina inkqubo yoxinzelelo rhoqo, kwimeko yotshintsho olungenayo, ukunceda ukonga amanzi ngokuthintela ukuhamba kwawo kakhulu, ukuphelisa umngcipheko wesando samanzi kunye nokunciphisa ingxolo kunye nengxolo eveliswayo ngexesha lokusebenza kwale nkqubo yamanzi.
Abalawuli boxinzelelo lwamanzi babekwe ngasemva imitha yamanzi i isihluzo samanzi kwintambo yamandla ephambili. Banokufakwa kwimimandla kwimibhobho yokufudumeza kunye neetanki, kodwa esi sisisombululo esisetyenziswa kuphela xa ukufikelela konxibelelwano olukhulu kungenzeki.
Ibekwe ngaphambili nangemva komlawuli ii-valves ezivalekileyo, evumela ukumiselwa kwayo kunye nolondolozo olulandelayo. Isixhobo sifakwe ngokuthe nkqo.
Bona kwakhona: Ukufakelwa kombane kwamanzi
Ukucutha uxinzelelo lwamanzi kunokufakwa kwiindawo ezahlukeneyo zenkqubo yamanzi:
ibandla eliphakathi - emva kwemitha yamanzi, i-valve ephambili kunye isihluzi kwintambo yamandla ephambili. Ngexesha lofakelo, khumbula malunga necandelo lokuphumla lokuphumla emva komlawuli kunye nokufakwa komlawuli emva kokugungxula ukufakelwa. Ukuseta uxinzelelo olusisiseko sayo yonke inkqubo kugcina amanzi.
indibano yengingqi - kwimigca yokubonelela ngeehitha zamanzi ezivaliweyo kunye neetanki zokugcina, xa injongo yokufaka isinciphisi soxinzelelo lwamanzi kukuthintela ukuvula i-valve yokukhuseleka kwimeko yoxinzelelo lwengcinezelo yokusebenza. Oku kuvumela ukungcungcutheka kwe-heater kusebenze.
ukuphazamiseka -Kukho kuphela kwindawo yokufaka ibhoyila kunye nokusetyenziswa ngaxeshanye kweentloko ezineethermostats Isimo sebhulorho yoxinzelelo sinokuvela apha, esiza kubangela ukutywinwa kwevalve yokhuseleko. Kule meko, abanciphisi boxinzelelo kufuneka balawule ukuhamba kwamanzi ashushu nabandayo.
kwiinkqubo zonikezoUmzekelo, izakhiwo eziphakamileyo, ngeenkqubo zoxinzelelo, apho kufuneka khona imimandla yoxinzelelo. Izithinteli zoxinzelelo lwamanzi zisetyenziswa xa uxinzelelo lokuphumla kwinkqubo lungaphezulu kwe-5 bar okanye xa uxinzelelo lokuphumla kunyusa ivalvu yokhuseleko (umz. Isixhobo sokufudumeza amanzi) sigqitha kwi-80% yoxinzelelo lokuvula.
Uxinzelelo lwamanzi kwimibhobho kufuneka luhlengahlengiswe kukubanakho kwezixhobo kunye neenkqubo ezifakwayo kufakelo lwamanzi. Uxinzelelo lwamanzi luphezulu kakhulu kunokubangela ukonakala okanye ukungasebenzi kakuhle kwenkqubo, ke kuncitshisiwe uxinzelelo loxinzelelo lwamanzi kwinkqubo yamanzi.
Inqaku elisebenzayo le-minimer nganye likhethekileyo ulusu inoxanduva lokunciphisa ukusebenza koxinzelelo lwamanzi kwinkqubo yamanzi.
Xa yomelele kakhulu indiza yamanzi isebenza ulusu kwinciphisointwasahlobo iphakanyisiwe, eyonyusa itywina kwaye ivumela uxinzelelo lwamanzi olufunekayo ukuba lufezekiswe. Xa uxinzelelo lwehla ngezantsi kwenqanaba elibekiweyo, intwasahlobo yehla, ivumela ukuba amanzi ahambe.
Kukho ezahlukeneyo, zihlala zintsonkothile, izisombululo ezisetyenziswa kwimakethi kodwa ngokuhlalutya ruxinzelelo lwe-eductor yoxinzelelo lwamanzi nganye ayinakutshintshwa: isimboli, itywina kunye ne-valve isebenza kunye ukugcina uxinzelelo lokukhuphela kwinqanaba elikhuselekileyo.
Rhoqo, ukuthengwa kwesinciphisi soxinzelelo lwamanzi kuya kuba yimfuneko, kuba ukusetyenziswa kwayo kukhusela inkqubo yokuhamba kwamanzi kwiimpazamo ezibangelwa luxinzelelo oluphezulu kwaye yindlela yokunciphisa ilahleko yamanzi kwinkqubo.
Bona kwakhona: Isithambisi samanzi
Isithintelo soxinzelelo lwamanzi sisetyenziswa xa:
Uxinzelelo lwendlela yokusebenza egqithileyo kwixabiso elivumelekileyo
Uxinzelelo oluphezulu lwevali yokhuseleko lugqithe kwi-80% yevali yokuvula
Ukusetyenziswa kwexesha ukufakwa kunokubeka umngcipheko woxinzelelo lwexeshana
uxinzelelo lokuphumla kufakelo ligqitha kwi-5 bar
Ukulawulwa koxinzelelo lwamanzi kunqweneleka apho uxinzelelo lwenethiwekhi ekhoyo (Ubonelelo ngamanzi) iphezulu kakhulu isityalo okanye isixhobo okanye iphantsi koshicilelo lwexesha elithile.
Bona kwakhona: Buyisa i-osmosis
Kwintengiso unokufumana izixhobo zokwenza izinto ezahlukeneyo kwaye zenziwe ngezinto ezahlukeneyo:
I-Cartridge (ikhatriji) kuncitshiswa Inomzimba wobhedu onokudityaniswa kunye nebhokisi-yecwecwe enye eneefayile zemitha kunye nesitywina. Olu luyilo luvumela ukufakelwa ukuba kususwe kunye ne-mesh yokukhusela yokucoca. Yonke inkqubo yokucutha uxinzelelo lwamanzi ingaphakathi kwikhatyhthi ngoko ukugcinwa akuyi kutshintsha imeko yoxinzelelo.
Izinto zokuthambisa zensimbi Zixhathisiwe ziinkqubo zokonakala kunokwehlisa ubhedu. Ezi yokugqibela zibiza kakhulu, kodwa ziya kusebenza ngcono ngokusetyenziswa kwamanzi okungaphezulu.
1 intshi yokunciphisa uxinzelelo lwamanzi, ukunciphisa, okanye i-1/2 yokunciphisa uxinzelelo lwamanzi ikhethwe ngokuxhomekeke kububanzi bepayipi yokubonelela. Ukuqina kokuncitshiswa okuncinci kuyafana nakokwakukhulu, kwaye kukhethwe ngokufanelekileyo, kuya kuhlala iminyaka eliqela.
uxinzelelo loxinzelelo lwamanzi ngesihlungi sisisombululo esihle kakhulu ekufakweni ngaphandle kwezinye izihluzi. Isihluzi ngasinye esisetyenzisiweyo sikhusela ukufakelwa kumonakalo womatshini kwaye nokuba sonakele, ukutshintshwa kwesinciphisi kulula kakhulu kwaye kunqabile kunokukhupha ukusilela ekufakweni kwamanzi okanye ukubuyisela izixhobo ezisebenza kuyo. Kubalulekile ukwenza ukucocwa rhoqo nge-mesh yokuhluza efakwe phezulu komatshini oxinzelelo lwamanzi.
uxinzelelo loxinzelelo lwamanzi kunye ne-gauge yoxinzelelo eyakhelwe-ngaphakathi okanye ngaphandle yenza ukuba kube lula ukuyisebenzisa kwaye yonyula ukusebenziseka kwenkqubo yamanzi, inika ukufundwa ngokukhawuleza koxinzelelo lwangempela kwinkqubo yamanzi.
uxinzelelo loxinzelelo lwamanzi ngeefilitha kunye noxinzelelo lwegesi isisombululo esibanzi kwaye kulula kakhulu ukusisebenzisa.
Iimodeli zabacheki bezilawuli zoxinzelelo zinoxinzelelo lwefektri. Ukuba ukhetha unciphiso lokunciphisa uxinzelelo lwamanzi, unokuhlengahlengisa kwaye utshintshe iiparamitha zesixhobo ngesandla.
Bona kwakhona: I-Poidełko
4.8 / 5 ( 28 iivoti )
uxinzelelo loxinzelelo lwamanzi e-castoramaisebenza njani indlela yokuphelisa uxinzelelo lwamanziUngayicoca njani i-amanzi ehlisa uxinzeleloindlela yokulungelelanisa isinciphisi soxinzelelo lwamanziuyifaka njani indawo yokunciphisa uxinzelelo lwamanziYeyiphi ingcinezelo yokunciphisa amanziuxinzelelo lokunciphisa amanziuxinzelelo loxinzelelo lwamanziuxinzelelo loxinzelelo lwamanzi i-1 intshi1/2 uxinzelelo loxinzelelo lwamanziI-1/2 intshi uxinzelelo lwamanzi okunciphisaI-2 intshi yoxinzelelo lwamanzi3/4 uxinzelelo loxinzelelo lwamanziI-3/4 yoxinzelelo loxinzelelo lwamanzi nge-gauge yoxinzelelouxinzelelo loxinzelelo lwamanzi e-castoramauxinzelelo loxinzelelo lwamanziukucoca uxinzelelo lwamanziuxinzelelo lonkcenkceshelo lwamanziuxinzelelo loxinzelelo lwamanzi i-herzuxinzelelo lokunciphisa amanzi kwi-herzuxinzelelo loxinzelelo lwamanzi e-honeywellIncwadana yemigaqo yokuvuselela uxinzelelo lwamanzi kwisinyosiIncwadana yemiyalelo yokunciphisa uxinzelelo lwamanziuxinzelelo loxinzelelo lwamanzi ukuba lusebenza njaniuxinzelelo loxinzelelo lwamanzi indlela yokutshintshauxinzelelo loxinzelelo lwamanzi indlela yokusetaleroy merlin uxinzelelo loxinzelelo lwamanziuxinzelelo loxinzelelo lwamanziUhlengahlengiso lokunciphisa uxinzelelo lwamanziuxinzelelo loxinzelelo lwamanzi ngesihlungiuxinzelelo loxinzelelo lwamanzi ngeefilitha kunye noxinzelelo lwegesiuxinzelelo loxinzelelo lwamanzi kunye ne-gauge yoxinzelelouxinzelelo lokunciphisa uxinzelelo lwamanzi